Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Dalxiiska » 10ka meelood ee ugu sarreeya safarada socdaalka kali ah sanadkan
Safarka Dalxiiska • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Iceland News Breaking News • Wararka Jabhada Malta • News • Dadka • Wararka Burburinta Portugal • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Socdaalka kali ah wuxuu furaa fursado badan iyo xorriyad, taas oo kuu oggolaanaysa inaad samaysato ajendahaaga, samaysato saaxiibo cusub, oo aad qof ahaan u korto.
Iceland waa dal si gaar ah ammaan u ah, oo leh dhibcaha heerka nabdoonaanta ee 76.2 iyo heerka dembiga oo ah 23.8.
Malta waxaa lagu yaqaanaa xiriir taariikhi ah oo ay la leedahay boqortooyooyin badan iyo qalcado iyo macbadyo badan oo ay ka tageen.
Bortuqiisku wuxuu caan ku yahay dhul -quruxdiisa, xeebaha iyo naqshadaha, iyo cuntooyinka badda ee waaweyn, laakiin sidoo kale waa dal saaxiibtinimo leh oo ammaan ah.
Haddii aad tahay nooc ka mid ah dadka jecel inay boorsooyinkooda ku dhex tuuraan kaydinta boorsooyinka si toos ah markaad timaaddo oo aad halkaas ka soo sahamiso magaalo cusub adiga keligaa, markaa miyaad waligaa ka fikirtay inaad ku biirto xiisahaaga kaligaa?
Haddii asxaabtaadu aysan si dhab ah u qabin dhibka safarka sidaada oo kale, waxaad neceb tahay culeyska inaad yeelato inaad qorsheysato dad kale, ama aad rabto inaad ku qaadato boorsada dhabarka oo aad aragto halka safarku ku qaadanayo, waxaa jira sababo badan oo sababta socdaalka keligaa wuxuu noqon karaa waayo -aragnimo aad u wanaagsan.
Laakiin haddii aad si toos ah uga baxdo dugsiga sare oo aad bilowdo sannadka farqiga ah ama aad raadinayso khibrad cusub nolosha dambe, safarkaaga kaligaa wuxuu noqon karaa waayo -aragnimo aad u dhib badan, sidaa darteed khubarada safarka ayaa falanqeeyay dhowr meelood oo adduunka ah ogow kuwa ugu fiican, ugu nabdoon, iyo meelaha ugu jaban ee safarka kali ah.
Natiijooyinka daraasaddan ayaa la sii daayay maanta oo muujinaya waddamada ugu wanaagsan adduunka ee socdaalka keli ah 2021.
Cilmi -baaristu waxay eegtay qodobo ay ka mid yihiin qiimaha gaadiidka dadweynaha, dembiyada iyo amniga, heerkulka, qiimaha hoteelka, tayada hudheelada, baararka, maqaayadaha, soo jiidashada, hawlaha kooxda iyo roobka.
10 -ka waddan ee ugu sarreeya safarka kali ah:
Rank Country Dhibcaha Safarka Solo /10